Ngwa mma & Mgbakwunye Factlọ ọrụ, Ndị na - eweta ya - China Ngwa & Mgbakwụnye Nsukka
Cork na Ribbed pad
Dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị asọmpi nke ụlọ ọrụ, ihe mkpuchi anyị na mpempe akwụkwọ na-enye ọkwa kachasị elu na nkwụsịtụ ụda. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. E wezụga nke ahụ, ha dị mfe ịwụnye ubi.
Ngwongwo ígwè na Ribbed
Dị ka otu n'ime ndị na-asọ asọmpi nke ụlọ ọrụ, a na-eji ígwè na mpempe akwụkwọ arụọ ígwè anyị. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. E wezụga nke ahụ, a haziri ha maka ikike dị elu.
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị n'uko flanges e mere maka attaching a hanga ma ọ bụ support mkpanaka ibé, uko ụlọ, ma ọ bụ mgbidi. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Ahaziri Eriri U-bolt na Mkpụrụ
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị ahaziri eri U-bolt na akụ Ezubere maka General piping Ngwa. Ọ natawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East, Europe na Asia. Ọzọkwa, biko jiri nwayọ rịba ama na mkpụrụ abụọ dị n'akụkụ nke ọ bụla.
Side Doo njikọ
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị n'akụkụ doo njikọta e mere maka attaching hanga mkpanaka n'akụkụ nke doo ma ọ bụ mgbidi. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Mankeumman Oke doo mwekota
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị n'elu doo clamps bụ UL mma. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East, Europe na Asia. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.